Warkii.com-News and information about Somalia TUULOOYIN KU YAALLA HINDIYA OO CAADAYSTAY IN AY DADKOODA GABOOBA EE WAAYEELKA AH U TUURAAN SHABEELKA - Warkii.com-News and information about Somalia
Dad ku nool Tuulooyin dhawr ah oo ku yaalla waddanka Hindiya ayaa lala yaabay hab-dhaqankooda kadib markii la ogaaday in ay dadka waaweyn ee da’da ah u tuuraan shabeelka dad qaadka ah si ay ugu helaan dhaqaale iyo taakulo ay xukuumaddu siiso.
Sida uu ku soo warramayo wargeyska Indian Times oo Warkii.com maqaalkan layaabka leh ka soo xiganayo, tuulooyin dhawr ah oo ku yaalla woqooyiga dalkaasi Hindiya, gaar ahaan xuduudda ku teedsan waddanka Nepal ayaa waxa laga soo sheegayaa dhacdo layaab leh kadib markii baadhitaano la sameeyey lagu ogaaday in dadka tuulooyinkaasi ku nooli ay caadaysteen in ay dadkooda gaboobay ay u tuuraan shabeelka dad-cunka ah ee dhulkaasi ku nool kadibna ay dawladda uga soo dacwoodaan dhibaatada Shabeelka dad cunka ahi ku hayo dadka deegaankaasi si ay xukuumaddu taageero dhaqaale u siiso dadka shabeelkaasi ka cunay iyaga oo xukuumadda ugu dhigaya in shabeelku soo weeraro oo uu dadka ka cuno balse ugu dambayn la ogaaday in dadka tuuloyinkan ku nooli ku kacaan falal layaab leh oo ah in ay dadkooda gabooba u tuuraan shabeelka wakhtiga habeenkii si ay maalintii ugu doodaan in shabeelku habeenkii soo weeraro oo dadka ka laayo balse nuxurka ujeedadoodu noqotay in ay dhaqaale raadis u sameeyaan arrinkaasi argagaxa leh.
Warbixintan oo warkii.com idiin soo turjumay waxa ay intaasi ku daraysaa in Arrintan ay ku soo beegmayso kadib markii dhawr sano ka hor ay dawladda Hindiya u ballan qaaday dadka tuulooyinka ku nool ee ilaaliya deegaanka iyo keymaha iyo waliba duur joogta ay siin doonaan lacago mag-dhaw ah haddii xayawaanada duur-joogta ahi waxyeelo nafeed soo gaadhsiiyaan.
Waxaana hore u dhacday in dad kala duwan oo waxyeelo ay ka soo gaadhay Maroodiyaal dad dil ah iyo shabeelo ay xukuumaddu siisay lacago qaarkood qaddarkoodu yahay Nus Milyan Rubbi oo lacagta Hindiya ah. Taasi ayaa dhalisay in dadka tuulooyinkan ku nooli si ay lacago u helaan ay u doorteen in dadkooda gabooba ay shabeelka iyo libaaxa dad qaadka ah habeenkii u daadiyeen si marka ay xayawaanadaasi hilbaha dadkaasi cunaan ay ugu dacwoodaan in dadkoodii shabeel u soo dhacay oo u laayay. Arrinkan ayaa fashilmay kadib baadhitaan dheer oo lagu sameeyey sababta dadka waayeelka ah oo kali ahi ugu dhimanayaan gacanta shabeelada khatarta ah.